Nri ndị na-anaghị efe efe: rie nri ka ọ ghara ịna-arịa ọrịa ma nwee obi ụtọ | Nutri Nri
Michael Serrano | | Nkwere maka enyemaka
Ike gwụrụ gị ma ọ bụ akpịrị na nso nso a karịa ka ọ dị na mbụ? Gbaso nri mgbochi mkpali nwere ike inyere gị aka inwe mmetụta ka mma. Ọ bụkwa na mbufụt nwere ike ịbụ ihe kpatara nsogbu ahụ.
Nri mgbochi na-enyere gị aka iri nri nke ọmadị ka ọ mejupụtara a usoro nke ahụ ike na-eri àgwà. Ha na-emesi gị obi ike na ị ga-enweta ọtụtụ nri bara uru ma na-edobe ndị nwere ike imerụ ahụ, dị ka trans abụba, na mmiri. Chọpụta ihe ọ bụ na otu esi etinye ya n'ọrụ.
1 Kedu ihe bụ nri mgbochi mkpali?
2 Kedu ndị na-eri nri mkpali maka?
3 Ihe oriri enyere
3.1 Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri
3.2 Abụba ike
3.4 Dum ọka
3.5 Akwụkwọ nri
3.9 Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
4.1 Nri mmanu
4.2 Hazie na nri shuga
Kedu ihe bụ nri mgbochi mkpali?
Dị ka aha ya na-egosi, ụdị nri a bụ atụmatụ nri nke na-agụnye nri nwere ihe mgbochi mkpali. A na-eche nri ndị nwere ihe ndị a na-ebelata ohere nke ịmalite ọtụtụ ọrịa.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara iji nye nri gị nsogbu mgbochi mkpali. Ma ọ bụ na nhụjuanya na-adịgide adịgide ga-akpata ọtụtụ ọrịa. Nnyocha e jikọtara nsogbu a na kansa, ọrịa shuga na ọrịa Alzheimer, yana ọrịa obi.
Kedu ndị na-eri nri mkpali maka?
Atụmatụ nri ndị a bụ karịsịa akwadoro maka ndị na-arịa ọrịa na-akpata mbufụt, dị ka ọrịa ogbu na nkwonkwo. Ime mgbanwe na nri gị anaghị ewepụ nsogbu mkpali ahụ, mana ekwenyere na ọ nwere ike belata mgbaàmà ya, ma ọ bụ site na mbenata ọnụ ọgụgụ ọkụ ma ọ bụ belata ogo mgbu.
Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa ka ị na-ata ahụhụ site na mbufụt na-adịghị ala ala iji soro ya, kama ọ bụ nri mgbochi mkpali kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla. A na-ahụta ya dị ka nhọrọ nri siri ike dị oke mma.
Ihe oriri enyere
N'ụzọ bụ isi, nri ndị na-egbochi mkpali na-atụ aro ka ị rie nri dum karịa nri esichara. Mana ka anyi hu n'uju nri niile ekwere na ndi nke ha dula.
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri
Ọtụtụ nri kwesịrị ịbụ ndị otu abụọ a. Nzọ na widest dịgasị iche iche nke agba ga-ekwe omume. Examplesfọdụ ihe atụ bụ oroma, tomato, na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka akwụkwọ nri ma ọ bụ kale.
Mmiri mkpụrụ osisi
Agụnyere ezigbo abụba dị ka mmanụ oliv, ube oyibo, walnuts, ma ọ bụ mkpụrụ osisi chia. Okwesiri iburu n’obi na ọ dị mkpa iji chịkwaa ọtụtụ nri ndị a n'ihi kalori ha. Dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ nwere ọtụtụ uru, mana njedebe bụ obere aka kwa ụbọchị. Ma ọ bụghị ya, abụba na calorie na-agbakọta, na-amụba ohere nke ibubiga oke oke.
Usoro nri na-egbochi mkpali na-agụnye azụ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu. Salmon, tuna, na sardines bụ ụfọdụ azụ kasị mma maka nzube a. Ihe kpatara ya bụ na ha bara ọgaranya na omega 3 fatty acids, nke na-alụ ọgụ mbufụt.
A na-eji ọka ndị a kụrụ akụ dochie ọka a nụchara anụcha, nke, na mgbakwunye na ịbụ ndị na-edozi ahụ, nwere ike inye aka na mbufụt. Dịka ọmụmaatụ, a na-eri osikapa na achịcha ọka niile karịa ọcha. Oatmeal maka nke ya, oatmeal bụ ezigbo nri ụtụtụ.
Ha bụ otu n'ime usoro nri kachasị mma, yana mgbochi mkpali abụghịkwa otu. Ihe kpatara ya bụ na juputara na fiber na mgbochi mkpali.
Raspberries, blakberị, ma ọ bụ bluuberi na-enyere aka ịlụ ọgụ. Ihe nzuzo dị na umi na-enye ha agba ha.
A bịa n’ihe banyere mmanya, ọcha tii na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii kwesịrị nrịba ama. Otu iko ole na ole n'ụbọchị nwere ike ịlụ ọgụ maka ekele ya polyphenols. A na-ewerekwa mmanya na-acha uhie uhie bara uru na obere.
Turmeric, ginger, cinnamon, na cayenne Ha so n’etiti ngwa nri nwere ngwa ọgụ mgbochi. Garlic ga-enyekwara aka ịlụ ọgụ mbufụt.
N'ihi nsogbu mgbochi koko nke koko, kwere ka ọchịchịrị gbara ọchịchịrị (na ịdị mma).
Ebe ọ bụ na ha nwere ike ime ka mmetụta dị iche karịa nke gara aga (ha na-ejikọta ya na mmụba nke mbufụt), mgbochi nri nri anaghị ekwe ka ị rie nri ndị a:
Fba abụba na-ebuli LDL ma ọ bụ cholesterol ọjọọ, na-ebute mbufụt. A na-ahụ ha na nri dị ka achịcha dị iche iche ma ọ bụ fres nke France. Chọọ maka ha na aha mmado n'okpuru aha mmanụ hydrogenated. Abụba abụba, dị na nri dị ka uhie na anụ edozi ma ọ bụ Pizza, kwesịrị ịbelata.
N'aka nke ọzọ, using usingusingubiga ihe oriri e ghere eghe na-eduga n’ibu ibu na ibu oké ibu, tinyekwara mmụba dị ukwuu. Zere ya site na iji obere mmanụ iji sie nri gị. Kwadebe ha ghere eghe, sie ma ọ bụ sie. Mgbe ọ na-abịa abụba mmiri ara ehi, ọ na-akụ nzọ na 0 percent iche.
Hazie na nri shuga
Na mgbochi nri nri a dụrụ ya ọdụ ka ị zere ihe ọ bụla na-edozi ma ọ bụ na-ara oké shuga. Iji ha eme ihe na-eme ka ohere nke ibubiga oke ibu na elu shuga na cholesterol n’ime ọbara buru ibu. Na nsogbu ndị a niile metụtara mbufụt. Ihe ọụ Softụ mmanya na ihe ọ sweetụ drinksụ na-atọ ụtọ n’ozuzu bụ ihe atụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Ọgwụ mgbochi mkpali
Nkụnwụ ọgwụ, Cloves